Warbixin ku saabsan xaaladda dhaqan, dhaqaale, waxbarasho, caafimaad iyo midda ammaan ee Buutinle. – Radio Daljir
Warbixin ku saabsan xaaladda dhaqan, dhaqaale, waxbarasho, caafimaad iyo midda ammaan ee Buutinle.
Burtinle, Feb 06 – Magaalada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal waxay ka mid tahay degmooyinka faca weyn ama qadiimiga ah ee deegaannada Puntland, waana magaalo aan baaxad ahaan yarayn dad fara badanna ay ku nool yihiin.
Magaaladu waxay taallaa meel batal balli ka war qab ah, baashana ku haysa dhulka hawdka loo yaqaanno, waxaana ay hareeraha ku leedahay balliyo biyo qabatin leh oo ay xareeddu jiifsado xilliyada roobabka.
Hay?adaha dawladda ee kala duwan ayaa si rasmi ah uga hawlgala magaalada, waxaana ku yaalla xafiisyo kala dawan oo ay leeyihiin laamaha dawladda kuwaasi oo dhammaatood shaqaynayey xilli aan kormeeray meelaha ay ka furan yihiin.
Kasow maamulka dhexe ee dawladda Puntland, magaalada waxaa si xooggan uga shaqeeya maamulka dawladda hoose, kaasi oo muujiyey dadaallo wax ku ool ah oo ah xagga hormarka ah, waxaana ka mid ah maamulku waxyaabaha uu wax ka qabtay nadaafadda iyo bilicda magaalada, bannaynta waddooyinka iyo inta badan arrimaha kale ee loo igmaday dawladaha hoose ah.
Haddii aynu u daadagno adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo ammaan ahaan sida magaaladu tahay, dhammaantood waa kuwo caadi ah, mana jiraan dhaliilo waaweyn oo hadda muuqda, inkastoo ay jiraan cabshooyin dadweyne gaar ahaanna xagga caafimaadka oo aysan degmadu lahayn cisbitaal guud oo shaqeeya.
Haddaan daymoono dhanka waxbarashada magaaladu waxay leedahay dhawr dugsi hoose dhexe iyo hal dugsi sare oo dhammaantood shaqeeya, waxayna Burtinle ka mid tahay meelaha lagu amaano xagga waxbarasha.
Xagga ganacsiga magaalada Buurtinle waxaa ka jira dhaqdhaqaaq fiican, waxaana haddii aad tagtid bakhaarada ganacsiga ay indhahaagu qabanayaan baarbuurta xamuulka ah oo dejinaya badeecado ay ka soo daabuleen magaalada dekedda ah ee Boosaaso, iyadoo dhanka kala baraha suuqyada ahi ay camiran yihiin.
Dhanka ammaanka magaaladu aad ayey u wanaagsan tahay, waxaana shaqeeya laamaha ciidanka bileyska, iyadoo uu jiro saldhig bileys oo si xooggan u hawlgala, waxaana xilligii aan tagay magaalada ku sugnaa mas?uulka sar sare oo xagga amniga ah oo uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidana bilyska Puntland, xildhibaanno iyo madax kale oo halkaasi u yimid kormeer hawleed.
Burtinle waxay magaalo u tahay in badan 40 tuulo oo ku kala yaalla jahooyinka kala duwan iyo sidoo kale dhul-miyi ah oo maaxad ahaan aad u ballaaran, waxaana magaalada ka baxa in ka badan 10 waddo oo kala aada bariga, koonfurta, waqooyi iyo galbeedka magaalada kuwaasi oo tago tuulooyin soke iyo kuwa shishe oo oo ganacsi ahaan ku xiran Buurtinle, kuwaasi oo la soo safar taga dheefta xoolaha iyo dhogor ahaantoodaba.
Waxay leedahay suuqyo kala duwan sida suuqa bagaashaka, suuqa xoolaha nool iyo midka hilibka iyo kan qudaarta oo dhammaantood ah kuwa shaqeeya oo camirnaa xilligii aan tagay, kuwaasi oo qiimaha ahaan ka hooseeya sicirka wax la kala siisto qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee Puntland.
Magaalada Buurtinle waa magaalo ku tiigsan wax soo saarka xoolaha nool, marka aad tagtidna meheradaha shah lagu cabbo amaba meelaha Soomaalidu fadhi ku dirirka u taqaan, waxyaabaha dadka iska waraysanayaan waa ay ka duwan yihiin kuwa magaalooyinka waaweyn oo badanaa la iska waraysto arrimaha siyaasadda iyo wixii ugu danbeeyey ee xalay dhacay, hase ahaatee reer Puntland waxa ugu badan oo ay is weydiinayaan waxaa weeye arrimahay ay ku taxaluqaan oo ay ka mid yihiin xoolaha nool iyagoo iska waraysanaya caafimaadka xoolaha, cabidooda, carshin ahaan waxa ay haystaan iyo sidoo kale halka kala iibsigoodu marayo.